Ndabere / Weghachi ekwentị Data
Mbubata / Export Music
Mbubata / Export Photos
Send SMS site Mac
Jikwaa gị Ndi ana-akpo
Mbubata / Export Videos
Wụnye & Uninstall égwu
Olee otú ndabere / Weghachi ekwentị Data
Akpa, biko jikọọ gị Android ngwaọrụ a eriri USB.
Jikọọ na ngwaọrụ gị, malite usoro ihe omume na ị ga-ahụ ya isi interface dị ka n'okpuru. The nhọrọ na nkwado ma weghachite na-ma odude na ngwaọrụ gị n'ụlọ ihuenyo. Nanị pịa nhọrọ ị chọrọ iji ndabere ma ọ bụ weghachi ekwentị gị data.
Pịa green ndabere bọtịnụ na ndị na-esonụ Back Up window. Họrọ ọdịnaya na ị chọrọ iṅomi dị ka kọntaktị, SMS, ngwa ọdịnala, wdg ma họrọ a nchekwa ịzọpụta faịlụ site na ịpị Chọgharịa. Mgbe niile bụ OK, pịa Back Up na-amalite usoro. Ọ na-nanị mere.
Pịa-acha anụnụ anụnụ Weghachi button imeghe Weghachi windows, ebe ị nwere ike họrọ nchekwa na faịlụ na ị chọrọ iji weghachi ngwaọrụ gị. Mgbe ahụ, pịa Weghachi mezue usoro. (Mgbe ị pịa Weghachi, igbe dị n'okpuru ebe na atọ nhọrọ ga-apụta. Anyị na-akwado gị iji họrọ Back Up nkwado ndabere na mpaghara ọdịnaya ma ọ bụrụ na ị na-ama kwadoo ngwaọrụ gị ozugbo n'ihu.)
Rịba ama: Mgbe akwado ma ọ bụ na-eweghachiri data, biko Akwụpụla ngwaọrụ gị. Ma ọ bụghị ya, ihe omume ga-ada rụchaa ọrụ ahụ.
Olee otú mbubata / Export Music
Pịa na Music na ekpe kọlụm, wee pịa Tinye iji họrọ na mbubata music faịlụ site na kọmputa gị. Ma ọ bụ nanị họrọ Import iTunes Playlist ịgbakwunye music si gị iTune n'ọbá akwụkwọ ozugbo. Mbupụ music, nanị họrọ songs ị chọrọ mbupụ na pịa Export na-azọpụta ha na kọmputa gị si na diski ike ma ọ bụ iTunes n'ọbá akwụkwọ. E wezụga importing na exporting music, a obere ngwa-enye gị ohere ike ọhụrụ playlist, tinye ọhụrụ nchekwa, ihichapụ songs, search songs, set songs dị ka ụdaolu, play songs, wdg ka amasị gị.
Olee otú mbubata / Export Photos
Pịa Photos na-abanye na foto management window. Iji tinye photos ngwaọrụ gị, nnọọ pịa Tinye na họrọ photos ị chọrọ mbubata, wee pịa OK rụchaa usoro. Mbupụ foto site na ngwaọrụ ka na kọmputa, pịa Export ma họrọ otu folda ịzọpụta photos. Ke adianade do, ị nwere ike ihuchalu, ihichapụ photos, ike / ihichapụ / nyegharịa albums na ọbụna idozi foto site oge, ebe, nchekwa, wdg
Olee otú Send SMS site Mac
Pịa SMS na n'okpuru window ga-apụta. Ị nwere ike pịa New izipu ozi site na gị PC. Ịzọpụta gị ozi Mac, nnọọ pịa Chekwa Ka na ịtọ a ebe nchekwa ịzọpụta SMS dị ka faịlụ na .txt format na gị Mac. Ọzọkwa, isi SMS management ọrụ dị ka Mark dị ka Read, Hichapụ, ebugharị, Search, wdg na-nyere na-eme ka SMS management on Mac mfe karịa mgbe.
Olee otú Jikwaa gị Ndi ana-akpo
Olee otú mbubata / Export Ndi ana-akpo
Pịa na kọntaktsị na ekpe kọlụm na Ndi ana-akpo page, wee pịa Bubata iji mbubata kọntaktị site na vCard faịlụ na Address Book. Mbupụ kọntaktị gị, nnọọ pịa Export bọtịnụ na họrọ mbupụ ha ka ha Akwụkwọ Adreèsị ma ọ bụ chekwaa ka vCard faịlụ.
Olee otú Tinye / Dezie Ndi ana-akpo
Pịa New ịgbakwunye a ọhụrụ kọntaktị. Ozi dị ka foto, nọmba ekwentị, email, wdg nwere ike kwukwara.
Ka idezie ẹdude kọntaktị, nri pịa onye ị chọrọ dezie ma họrọ Dezie Kpọtụrụ dezie yiri ọmụma, nke bụ otu ihe ahụ dị ka na-agbakwunye a ọhụrụ kọntaktị. What're ọzọ, ị nwere ike ịmepụta / nyegharịa / ihichapụ iche iche, ihichapụ kọntaktị, wdg ka mma jikwaa gị Android kọntaktị.
Olee otú mbubata / Export Videos
Na video management window, ị nwere ike Pịa Tinye iji họrọ ma videos ị chọrọ igwu na gị android ngwaọrụ. Mgbe na-agbakwụnye videos, biko ntị ka video formats dị ka Android ngwaọrụ akwado video formats bụ MP4 na 3GP. Mbupụ videos, nnọọ pịa Export ịzọpụta ha gị Mac effortlessly. Ke adianade do, ị nwere ike ihuchalu videos na wuru na-video ọkpụkpọ, ihichapụ ndị ị na-achọghị, ike video nchekwa, wdg
Olee otú Wụnye & Uninstall égwu
Iji wụnye ngwa ọdịnala na kọmputa gị, nanị pịa Wụnye button wee họrọ APK faịlụ site na kọmputa gị ma ọ nchekwa na ngwaọrụ iji wụnye ngwa ọdịnala ma na gị SD kaadị ma ọ bụ ekwentị nchekwa.
Iwepụ ngwa, họrọ ngwa ọdịnala na ị chọrọ iwepụ na pịa Uninstall bọtịnụ na menu mmanya. Wee họrọ Ee on mmapụta window ka ihichapụ ngwa site gị android ngwaọrụ.